HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaShaqada Wadada Tareenka ee TÜVASAŞ
13 / 01 / 2020 54 Sakarya, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, Gobolka Marmara, Tüvasas, TURKEY
tuvasasta tareenka qaranka ee la badalo
Ololaha Turkey baabuur Industry Inc. National Electric tareenka ayaa la bilaabay. Warshadu waxay dardargelin doontaa shaqadeeda shaqaalahana waxay hadda shaqeyn doonaan Sabtida. Tareenka qaran waxaa loo qorsheeyay inuu ku socdo wadada tareenka dhamaadka Juun ama Luulyo.
Turkey baabuur Industry xaaqiijiyay (TÜVASAŞ), shirkado shisheeye kuwaas oo uu leeyahay aqoon by-soo-saarka taxane tareen naaftada hoos liisanka, waxaa loogu tala galay in loo isticmaalo wax soo saarka ee nooc tareen korontada qaranka.
Waxaa la saadaalinayaa in imtixaanka iyo shahaadada ee taxanahan tareenka la soo gabagabeynayo dhamaadka sanadka waxsoosaarka serial uu bilaabmi doono.
Intaa waxa u dheer, taxanaha tareenka korantada qaranka ayaa la sameeyay waxaana la bilaabay jaangooyooyin xawaare sare leh oo loo qaabeeyey si waafaqsan 225 km / h si loogu isticmaalo daraasadaha R&D.
Shaqada naqshadaynta ee aagagga korantada qaranka ayaa la dhammayn doonaa sannadka soo socda.
TÜBİTAK waxay isku dubaridi doontaa howlaha R & D ee mashruuca waxayna horumarin doontaa qeybaha muhiimka u ah heerka tusaalaha. Soosaarka baaxadda leh ee isku-xidhka korantada qaranka waxaa loola dan leeyahay in la bilaabo 2022 oo tusaalaha tareenka xawaaraha sare ee qaranka la dhammeeyo 2023.
Tareenka korantada qaranka wuxuu ku dhufan doonaa jidadka sanadka 2020
Elektrikli Waxaan u aragnaa jidkeenna tareenka mid ka mid ah xiriiriyeyaasha ugu muhiimsan ee dhaqdhaqaaqyada horumar waara, Cah ayaa yiri Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka taariikhda tareenka Qaranka.
Mehmet Cahit Turhan ayaa yidhi, tik Waxaan aad ugu dadaalnay sidii aan dib ugu soo noolayn lahayn aaggan dayacan muddo sannado ah. Annaga oo hogaamineyna Madaxweynahayaga, waxaan u rognay waddooyinkeena tareenka inay ku noqdaan siyaasada gobolka. Waxaan dib u cusbooneysiinay dhammaan khadadka ugu waaweyn ee shabakaddeenna tareenka ee hadda ah 11 km. Iyada oo la raacayo qaab dhismeedka sharci ee aan sameynay, waxaan u furnay wadada tareenka qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxaan diyaarinay aasaaska sharciga ee rarka xamuulka iyo rakaabka tareennada gaarka loo leeyahay ee qaybta gaarka loo leeyahay shabakaddayada tareenka. 590. Waxaan samaynay 1 kiiloomitir oo tareenka xawaare sare leh.
Ku dhawaad ​​52 milyan oo safar ah ayaa ka dhacay waddooyinka Ankara-Eskişehir-Istanbul, Ankara-Konya-Istanbul. Waxaan hadda soo saaraynaa qayb muhiim ah oo ka mid ah agabyada tareenka xawaaraha sare ku jooga waddankeenna. Waxaan soo saarnay gaari xamuul oo xamuul qaran ah, waanu adeegsanaa. Sanadka 2020, waxaan hiigsaneynaa inaan qaadno 9,8 milyan oo rakaab ah oo loo wado 'YHT'.
Gaadiidka TCDD Co. 29,3 milyan oo tan, 5,5 milyan oo tan oo ay leeyihiin hawl-wadeennada tareenka tareenka gaarka loo leeyahay, oo ay ku jiraan 34,8 milyan oo xamuul xamuul ah ayaa lala beegsaday. Marmaray ayaa hadafkeedu yahay 2020 milyan oo rakaab ah sanadka 146.
Waxaan filaynaa in 14,6 milyan oo rakaab ah lagu qaado Ba inkentray. TÜVASAŞ, waxaan yareyn doonnaa tareenka ugu horreeya ee Tareenka Korantada Korantada Qaranka ee loo yaqaan 'Rails Set' ee biraha 2020-ka oo aan bilowno wax soo saar ballaaran. " (Medyab waa)
Mashruuca Asphalt ee Degmada Kargi
Shaqada Yurub ee Goobaha Xadiiqooyinka ee Erzurum
Marmaray Temenye Höyüğü wuxuu billaabmayaa marxalad taariikheed
Ordu Cable Baabuur wuxuu sameynayaa socodka barafka
Wasaaradda Hawlgabka ee IZBAN
Trolleybus Ka shaqeeya Manisa Magaalo
Dhammaadkii tareenku wuu joojiyay injineerkii
Madaxwaynaha Kocaoğlu'nun Capital Mesutay oo si Ba'an u Gudbiyey
Beddelka Asphalt wuxuu ku sii jirayaa Corum
Tareenka Qaranka ee Korantada
wax soo saarka tareenka korontada qaranka